कोरोना महामारीको फ्याक्ट चेक : के भारतमा खोप लगाएकाहरु पनि धमाधम संक्रमित भएका हुन्? - Nepal Readers
Home » कोरोना महामारीको फ्याक्ट चेक : के भारतमा खोप लगाएकाहरु पनि धमाधम संक्रमित भएका हुन्?
कोरोना महामारीको फ्याक्ट चेक : के भारतमा खोप लगाएकाहरु पनि धमाधम संक्रमित भएका हुन्?
जुलिया होलिङ्सवर्थ, जेसी युङ र मिनकेतन झा। भारतमा कोभिड–१९ को संकट मडारिँदै गर्दा केही कुराहरु हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ । हरेक दिन भारतमा रेकर्ड संख्यामा संक्रमितहरु थपिरहेका छन् । यति धेरै मानिसहरु मरिरहेका छन् कि शवको अन्तिम संस्कार गर्न पनि सकस परिरहेको छ । आधिकारिक तथ्यांकभन्दा संक्रमित र मृतकको वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने बताइएको छ । तर, कोरोना भाइरस सँगसँगै भारतमा अफवाह पनि त्यतिकै चाँडो फैलिरहेको छ । यहाँ कोरोनाको दोस्रो लहरसँग भारतमा फैलिरहेको केही अफवाहको ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
​‘दोस्रो लहरमा युवाहरु बढी संक्रमित बन्ने खतरा बढेको पाइएको छैन,’ पाउल भन्छन्, ‘देशभरको तथ्यांकअनुसार कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुने उमेर समूहको तथ्यांकमा खासै घटबढ भएको पाइएको छैन ।’
फेरि पनि तथ्यांकले सो कुरा पुष्टि गर्दैन । भारतमा नै बनेको कोभ्याक्सिनको दुवै डोज लगाएका १७ लाख मानिसमध्ये ६९५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ले अप्रिलमा जनाएको थियो । यो भनेको ०.०४ प्रतिशत हो ।
स्रोत : सीएनएन/रोतोपाटी